माधव नेपाल जिल्लिए
काठमाडौं । अर्ली अधिवेशनमा प्रचण्ड सर्वसम्मत अथवा प्रम केपी ओलीले जिताउने बचन दिएपछि नेकपाभित्रको झगडा सुल्भिएको छ । हरिबोल गजुरेलका अनुसार पनि नेकपाभित्र अव सहमति बनिसक्यो । चैतको अधिवेशनमा प्रचण्ड एकमात्र अध्यक्षका उमेदवार बन्नुहुनेछ ।
यस्तो कुरा बाहिर आएपछि बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सन्निपात भएजस्तो देखिन्छ । नेपालले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीवीच गोप्य सहमति भएको आशंका गर्नुभएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालवीचको एकता कार्यदलको रिपोर्ट आएपछि पातलिएको बताइन्छ ।
माधव नेपालले भन्दै आएको विधि र पद्धति अनि ‘एक व्यक्ति एक पद’ को एजेन्डाको तातो अव सेलाएको छ । यसमा प्रचण्ड ओलीसँग मिलेको बुझाइ माधव नेपाल र पक्षधरको रहेको छ ।
पहिले ‘ओलीजीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदवाट राजीनामा दिनुपर्ने भनेर माग गर्ने प्रचण्डजी नै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँ आफैले उठाएको एजेन्डावाट उहाँ एकाएक पछि हटनुभएको छ,’ माधव नेपालको आशंकाको जरो यही हो । ओली र प्रचण्डवीच सहमति भएकै हो भने सबैभन्दा ठूलो घाटा माधव नेपाललाई नै हुनेछ । किनकि भावी अध्यक्षको जबरजस्त दावेदार माधव नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो । यसैका लागि माधव नेपाल बिधि र पद्धति भनिरहनु भएको थियो, कडा रुपमा ओलीको बिरोध पनि गर्नु भएको थिएन, प्रचण्ड अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, तर माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले खोलो तरेको अर्थमा माधव नेपालपक्ष सशंकित हुनपुगेको छ । यहाँसम्म कि मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनमा समेत माधव नेपालका मान्छे भनेर ओली र प्रचण्डलाई सघाउनेहरु पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्थायी समिति, सचिवालयदेखि केन्द्रीय समिति बोलाउने सम्मको अभियान यतिबेला अर्थहीनजस्ता लाग्न थालेका छन् । असार१६ देखिको ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बिबाद अव ओलीले राजीनामा दिनु नपर्नेमा आइपुगेको छ । यतिबेला माधव नेपाल धुरी प्रचण्डले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरे कि सम्झौता ? भनेर केलाउन थालेका छन् ।
कार्यदलमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका २–२ जना थिए, प्रचण्ड र नेपालका डबल प्रतिनिधित्वले पनि ओलीले राजीनामा दिनु नपर्ने रिपोर्ट कसरी बनायो ? धेरैले आश्चर्य प्रकट गरे । भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा नेपाल दयनीय अवस्थामा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।